Professional 2In1 Negative Ionic Air Bush Bush Hairdryer - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
Professional 2In1 Negative Ionic Air Bush Bush Hairdryer
$48.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $60.99
အရောင် ခရမ်းရောင် ဇီးသီး လိမ္မော်သီး
plug အမျိုးအစား EU us
ခရမ်းရောင် / အီးယူ Plum / ကျွန်တော်တို့ ခရမ်းရောင် လိမ္မော်ရောင်၊ အီးယူ လိမ္မော်ရောင် Plum / အီးယူ
Professional 2In1 Negative Ionic Air Bush Bush Hairdryer - ခရမ်းရောင် / အီးယူ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
မက်စ် ပါဝါ: 1200-1599W
Plug စံ: Eur
လုပ်ဆောင်ချက် - Anion
ဗို့အား: 100-240v (dual- ဗို့အား)
အရွယ်အစား: 30 * 15 * 9
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပါဝါ output: 1200-2000W
ပါဝါ - အီးယူ - ၂၂၀ ဗို့၊ အမေရိကန် - ၁၁၀ ဗ (သင့်တိုင်းပြည်ရှိဗို့အားကိုအတည်ပြုပါ)
ကြိမ်နှုန်း: 50/60 Hz
အရှည် - အဆင့်မြင့်နည်းပညာဒီဇိုင်း
nozzle type - လေစုဆောင်းခြင်းနှင့်ကြဲဖြန့်ခြင်း
ပစ္စည်း: ကို ABS
မော်တာအမျိုးအစား: DC က
Power ကရင်းမြစ်: လျှပ်စစ်
ဂီယာအရေအတွက် - ၁
အသုံးပြုမှု - အိမ်ထောင်စု၊ အလှပြင်ဆိုင်
အသုံးပြုသူညွှန်ကြားချက်များ - ပိုလျှံသောအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်သင်၏ဆံပင်ကိုသုတ်လိမ်းပါ။ သင့်လျော်သောလေပြင်းထန်မှုနှင့်အပူချိန်ညှိမှုကိုဖွင့်ပါ။ သင်၏ဆံပင်ကိုစုပ်ယူပြီးသင်၏အမြစ်များမှစွန်းတိုင်အောင်သွေ့ခြောက်အောင်လုပ်ပါ။
AC မော်တာ 1200-2000W နှင့်အတူပါဝါဆံပင်အခြောက်ခံစက်
Ergonomically ဟန်ချက်ညီပြီးတိတ်ဆိတ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ဆံပင်ကိုအညီအမျှမြန်စွာခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ
Cool & Hot ခလုတ်
ပေါ့ပါး။ အနိမ့်အနိမ့်ဆူညံသံ၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောနှင့်အမြင့်ဆုံး Shine Blow Dryer၊ Volumizer
Ion Hair Protection Technology - Ion နည်းပညာဖြင့် Ion Hair Dryer သည်ခြောက်သွေ့ချိန်နှင့်ခြောက်သွေ့ချိန်တွင်သင်၏ဆံပင်ကိုရေဓါတ်တိုး။ ပျော့ပျောင်းစေသည်။ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအိုင်းယွန်းများသည်ဆံပင်ကိုစိုပြေစေခြင်း၊ bifurcation ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
မြန်ပြီးလွယ်ကူသောဆံပင်ခြောက်သွေ့ခြင်း - ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို AC ပါဝါဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ လေအားကောင်းသဖြင့်ဆူညံသံနည်းပါးသည်။ 1200W - 2000W အားကောင်းသောစွမ်းအား၊ လေသည်ခိုင်မာသောနှင့်တည်ငြိမ်သောကြောင့်သင်၏ဆံပင်ကိုလျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့စေသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာသည်အပူချိန်မြင့်သောလျှပ်ကာနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းမီးမရှို့ရ။
Independent Button - ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်အမျိုးအစားများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းသည်သင့်ဆံပင်အတွက်အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဘက်စုံသုံးမှုကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
မတူညီသောလိုအပ်ချက်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - သင်၏ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါ။ အဆိုပါချောမွေ့ nozzle ဆံပင်ဖြောင့်သည့်အခါဆံပင်ခန်းခြောက်ဖို့အသုံးပြုသည်။ ပုံစံကို nozzle သည်လွယ်ကူသောပုံစံအတွက်လေကို ဦး တည်ထိန်းချုပ်သည်။ Airflow Gathering နည်းပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လေမှုတ်စက်၏လေကိုမြန်စေပါသည်။ အဆိုပါပျံ့ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကောက်ကောက်ပိုမိုမြင်နိုင်စေရန်အသုံးပြုသည်။
ထိုအထုပ်ထဲတွင်ပါဝင်သည်: (အမျိုးအစား ၁）)
1 x ဆံပင်အခြောက်ခံစက် 1300 XNUMXW ခန့်လောက်။
1 x ကိုလေစုဆောင်းခေါင်းကို
အထုပ်ထဲတွင်ပါဝင်သည်: (အမျိုးအစား ၂၊ အမျိုးအစား ၃）)
1 * ဆံပင်အခြောက်ခံစက်
1 * အနုတ်လက္ခဏာ ionic ဆံပင်အခြောက်ခံစက်
2 * Concentrator nozzles
1 * ပျံ့
46 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
သာမန်ဆံပင်အခြောက်ခံစက်၊ မြန်မြန်ရပြီ ကျွန်တော့်အတွက်တော့မသက်မသာ mode switch တစ်ခုပါ
အလွန်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့ !!!! အလွန်ကောင်းသောဆံပင်လေမှုတ်စက်; !!